खिमाको उपचारको लागि जनकल्याणकारी संस्था जापान द्धारा ५० हजार प्रदान ! – ebaglung.com
२०७५ आश्विन १, सोमबार १६:३०	Top News, थप समाचार
कमल पौडेल, बागलुङ २०७५ असोज १ । नकल्याणकारी संस्था जापानले बडीगाड गाउँपालिका वडा नं. २ सिमलचौर, हुकुर्थुमकी खिमा पौडेललाई उपचारको लागि नगद ५० हजार सहयोग गरेको छ। गत असारमा रुखवाट लडि शक्त घाइते खिमाको उपचार भैरहेको र आर्थिक अभावको कारण उपचारमा समस्या भएको भन्दै सो संस्थाले सहयोग गरेको हो। सो समितिको तर्फवाट पठाइएको रकम हस्तान्तरण गर्दै संस्थाका प्रतिनिधि जमुना सापकोटाले सो रकमले खिमाको उपचारमा थोरै भएपनि सहयोग पुग्ने वताईन् । नेपालमा जन्म भई जापानलाई कर्मथलो वनाएका नेपाली हातहरुले आफ्नो खाना कटाएर सो रकम संकलन गरेको बताउँदै सो सहयोगले खिमाको ज्यान वचाउँन सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
लामो समयसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रुपमा काम गरिरहेकी खिमा आर्थिक रुपमा कमजोर भएर उपचारमा समस्या भएको थियो। टाउकोमा गम्भिर चोट लागेकी खिमाको भरतपुर चितवनमा रहेको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भएको थियो। हाल आर्थिक अभावको कारण थप उपचारको लागि जान नसकेकी खिमाको लागि जनकल्याणकारी संस्था जापानको सहयोगले केहि सहज हुने भएको छ। खिमाले भन्नुभयो यस्तै सहयोग गर्ने संस्था भैदिय समय मै उपचार हुन्थ्यो। यो संस्थाले ठुलो गुन लगाएको छ।
सानैमा बाबा गुमाएर पीडित वनेका छोरा प्रताप निरन्तर सामाजिक सेवामा लागेकी आमा खिमा आफै थला परेपछि थप पीडित वनेका छन्।
सो जनकल्याणकारी संस्थाका आजीवन सदस्य अर्जुन खरेलको पहल तथा बडीगाड २ मा घर भइ जापानमा काम गर्दै आएका रामु सापकोटा, प्रिन्सी खरेल, लक्ष्मी सापकोटा सहितको सहयोग तथा संस्थाका अध्यक्ष अर्जुन खरेलको सक्रियतामा सो रकम पठाइएको हो।